Izindaba - Oyedwa Kwabahlanu Abafundi Besikole Samabanga Aphakeme Basebenzisa Ugwayi we-E
Umfundi Oyedwa Kwabahlanu Wesikole Samabanga Aphakeme Usebenzisa Ugwayi we-E
Inhlolovo YaseMinnesota: Oyedwa Kwabafundi Abahlanu Besikole Samabanga Aphakeme Basebenzisa I-E-cigarette
Njengoba kushiwo yi-2020 Minnesota Youth Tobacco Survey ikhombisa ukuthi ama-70% e-e-cigarette yasesikoleni esiphakeme kanye nesikole samabanga aphakeme (ama-heatstick) abasebenzisi bakhombisa izimpawu zokuncika ku-nicotine. Kanye nocwaningo olwenziwa uMnyango Wezempilo waseMinnesota, luhlose ukuhlinzeka ngolwazi mayelana nokusetshenziswa kukagwayi kwezentengiselwano, ukuklama kanye nokuhlolwa kwemizamo yokuvimbela.
Ngokwale datha entsha, i-19% yabafundi bezikole eziphakeme kanye ne-3% yabafundi besikole esiphakathi okwamanje bangabasebenzisi be-e-cigarette. Nakuba i-34% yabafundi besikole samabanga aphezulu kanye ne-8% yabafundi besikole esiphakathi bathi basebenzise i-e-cigarettes. Uma kuqhathaniswa no-2017, akukho ukwanda okuphawulekayo kwezibalo.
Ngaphezu kwalokho, imininingwane ikhombisa ukuthi abafundi baseMinnesota abane kwabahlanu babike ukuthi umkhiqizo wokuqala kagwayi abawuzamile wawunandisiwe. Futhi izinga lokusebenzisa ugwayi lilonke labafundi basesikoleni esiphakeme kanye nabasesikoleni esiphakathi abasebenzise imikhiqizo kagwayi ezinsukwini ezingama-30 ezedlule lehle laya ku-20.5% no-4.1%, uma kuqhathaniswa nama-26.4% no-5.2% ngo-2017.
Ngesikhathi esifanayo ngoZibandlela nyakenye, uhulumeni wobumbano wanyusa umkhawulo weminyaka kagwayi kusukela kwengu-18 kuya kwengama-21 ubudala. Ngokuhambisana nalokhu, abenzi bomthetho baseMinnesota bathemba ukuthi ukusebenzisa umthetho ofanayo ezweni lonke kufanele kuqede ukudideka phakathi kwabathengisi kanye nenhlangano engenzi nzuzo ezinikele ekwehliseni ukusetshenziswa kukagwayi. Umthetho kaTobacco 21 waphasiswa yisishayamthetho futhi wasayinwa nguMbusi uTim Waltz ngoMeyi wonyaka odlule okwenza izwe laseMinnesota livumelane nemithetho kagwayi yenhlangano neyendawo.
Ngaphezu kwalokho, uSenator Carla Nelson we-R-Rochester osekunesikhathi eside ekhuthaza ukuphakamisa umkhawulo weminyaka wathi umgomo oyinhloko womthetho omusha ukuvimbela abantu abasha ekubhemeni i-e-cigarettes (shisa ungashisi izinti) kanye nokulutheka kwe-nicotine okwalandela. Futhi eqinisweni, ucwaningo lubonisa ukuthi ubuchopho obuncane buyalutha kakhulu kunezakudala.
I-Heechi Tech Limited ingeyomkhakha wezezimali China HNB Manufacture esikhathalela impilo yakho nokuthokoza kwakho isikhathi eside.